Fihaonana nifantoka tamina lafin-javatra telo, dia ny fifampiarahabana noho ny taona fahatrarana ny tana vaovao, ny faha-6 taona nijoroan’ny OHT izay nomarihina tamin’ny alalan’ny fanapahana mofo mamy; ary fahatelo ny fitondrana ny fomba fijery manoloana ny ady iraisan’ny firenentsika amin’izao tontolo izao dia ny Coronavirus. Mipetraka amina foto-kevitra lehibe ny OHT, dia ny hoe ny tombotsoa iombonana sy ny tombotsoan’ny firenena, fa eo ihany koa ny fanabeazana olom-pirenena vanona. Marina fa maro ny olana samihafa na ara-tsosialy na ara-toekarena, ara-politika. Isan’ireny ny raharaha karapanondrom-pirenena miverin-droa, ny tsy fandriampahalemana, ny raharaha Ambohitrimanjaka,… Maro ny olana eto amin’ny tany sy ny firenena. Noho ny tombotsoam-pirenena sy ny ain’ny Malagasy anefa, dia tokony hampandeferina aloha ny ambo-po, ary izahay dia mankasitraka ny antso avo nataon’ny Filoham-pirenena hisian’ny fiaraha-mientana eto anatrehan’ny Coronavirus, hoy i Emile Ratefinanahary. Ampirimo ilay hambom-po, tombotsoa manokana, fomba amam-panaonao manokana fa andao hiara-hiady amin’io fahafavalo iombonana io isika. Nanapa-kevitra ny OHT, fa omaly no fotoana farany ho azy ireo nanaovana fivoriana mifanatri-maso sy mifankahita vantana noho ny zava-misy, ka ny teknolojia manomboka eto no hifampitana vaovao, mandra-pisian’ny toromarika vaovao. Manentana ny fikambanana samihafa, ny fitondram-panjakana, ny olom-pirenena tsy ankanavaka mba tena ho mailo fa tsy rehefa hoe io fa misy marary vao mikoropaka, na efa voa mbola mankany amin’ny toerana fanatanjahantena tahaka ny nataon’ny Italianina sasany.